၀ က်ဘ်ဆိုက်အတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်သော ၀ က်ဘ်ဒီဇိုင်းကုမ္ပဏီများသည် ၄ ​​င်းတို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုအချို့ကိုစံသတ်မှတ်ချက်ဖြင့်သရုပ်ပြသင့်သည်။ သို့မဟုတ်ပါကမှားယွင်း။ နေရာလွဲထားသောအလုပ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးအလုပ်သည်မည်သည့်ရလဒ်မျှမရရှိပါ။ [ပို ... ]
Corona ဖြစ်ပွားမှုကြောင့်ကမ္ဘာပေါ်ရှိပင်လယ်ကူးသင်္ဘောသား ၁၅၀,၀၀၀ သည်စာချုပ်များကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာတိုးချဲ့ရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေသည့်အခါပင်လယ်၌ပင်လယ်ရေကြောင်းခရီးသည်ပေါင်း ၁၅၀,၀၀၀ ရှိသည်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစည်းဝေးကြီးများအရသင်္ဘောသားများသည်လစာမရမှီ [ပို ... ]
ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ခရီးသွားလာရေး ၀ န်ကြီးဌာန၏ညှိနှိုင်းမှုဖြင့်စတင်ခဲ့သည့် TURKAK ၏အသိအမှတ်ပြုအသိအမှတ်ပြုသည့်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်လက်မှတ်၏ ၀ ယ်ယူမှုအခြေအနေများကိုဆုံးဖြတ်ပြီးကမ္ဘာ့ပထမ ဦး ဆုံးဥပမာဖြစ်သော Healthy Tourism Certification Program ၏မူဘောင်အတွင်းအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ထုတ်ပေးလိမ့်မည်။ တူရကီ [ပို ... ]
ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်း ၀ န်ကြီးဌာနမှ ၂၀.၀၂.၂၀၂၀ တွင်ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်အရ Coronavirus (Covid-20.05.2020) ဖြစ်ပွားမှုပျံ့နှံ့မှုကိုတားဆီးရန်ဆောင်ရွက်ချက်များအတိုင်းအတာအရထိန်းချုပ်သည့်ပုံမှန်ဖြစ်စဉ်ကိုစတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးပြည်ထဲရေး ၀ န်ကြီးဌာနမှဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းခံရမည်ဟုအစီရင်ခံခဲ့သည်။ [ပို ... ]
Kenan Çalışkan, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအရာရှိ - Sen၊ TCDD Taşımacılık A.Ş. သူသည်သူ၏ရုံးခန်းရှိ Kamuran Yazıcı၏အထွေထွေမန်နေဂျာကိုသွားပြီးရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ခေါင်းစဉ်ပြောင်းလဲခြင်းအင်တာဗျူးများတောင်းခံခဲ့သည်။ TCDD Taşımacılık A.Ş. အထွေထွေ [ပို ... ]
“ သင်သိပါသလား” သည်İGAနှင့် ပူးပေါင်း၍ သင်၏အမှိုက်ဖောင်ဒေးရှင်းကိုအကာအကွယ်ပေးရန်တီထွင်ခဲ့ပြီးအမှိုက်သရိုက်များ၏ပတ် ၀ န်းကျင်အပေါ်သက်ရောက်မှုများနှင့်ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်း၏အရေးကြီးမှုနှင့် ပတ်သက်၍ လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းပိုမိုသိရှိလာစေရန်ရည်ရွယ်သည်။ အမျိုးသားဓာတ်ပုံနှင့်အတိုဗီဒီယိုပြိုင်ပွဲနိဂုံးချုပ် [ပို ... ]
Kayseri မြို့တော်စည်ပင်သာယာ၏မြို့တော်ဝန် Memduh Büyükkılıçကယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုမရှိဘဲသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသက်တောင့်သက်သာရှိစေရန်နှင့်သူတို့၏ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုများကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ DSI Crossroad လမ်းတွင်အလုပ်လုပ်သောမြို့တော်ဝန်Büyükkılıçသည် Kayseri အသွားအလာရှိယာဉ်အသွားအလာကိုပိုမိုပြင်းထန်စေသည်။ [ပို ... ]
Mars Logistics Marmaray hattını uluslararası ihracat yük taşımacılığı için kullanan ilk firma oldu. Mars Logistics 15 Mayıs’tan itibaren Türkiye’de uygulanan demiryolu uluslararası yük taşımacılığında bir ilki gerçekleştirerek tarifeli olarak Marmaray [ပို ... ]
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံ ၀ န်ကြီး Adil Karaismailoğluက Konya-Karaman ရထားလမ်းအရှည်သည်ကီလိုမီတာ ၁၀၀ ရှိပြီး၊ ၎င်း၏အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့်တည်ဆောက်ပုံများပြီးစီးပြီဟုပြောကြားခဲ့သည်။ အချက်ပြဘို့ငါတို့လေ့လာမှုများဆက်လက်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကဒီနှစ်အကုန်မှာစီးပွားရေးကိုစဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ [ပို ... ]
Turkcell, Türk Telekom နှင့် Vodafone တို့က 1 GB Eid al-Fitr လက်ဆောင်ကိုပေးသည်။ ဤအကြောင်းအရာသည်အခမဲ့အင်တာနက်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးအတွက်အင်တာနက်ကိုရှာဖွေသောကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံသားများအတွက်အထူးပြင်ဆင်ထားပြီးဖြစ်သည် [ပို ... ]
TCDD Tasimacilik သည် coronavirus ကပ်ရောဂါကြောင့်ဆိုင်းငံ့ထားသော Eastern Express, Touristic Eastern Express နှင့် Van Lake Express ရထားဝန်ဆောင်မှုများစတင်မည့်အချိန်တွင်သိလိုစိတ်ပြင်းပြသည်။ ခရီးသွားများ၊ ဓာတ်ပုံဆရာနှင့်ပရိတ်သတ်များကစိတ်လှုပ်ရှားစေသည် [ပို ... ]
Marmara ၏မြူနီစီပယ်၏ပြည်ထောင်စုနှင့် Kocaeli Metropolitan မြူနီစီပယ် Assoc ။ ဒေါက်တာ Tahir Büyükakınသည်မြေအောက် ၅၂ မီတာအကွာအဝေးရှိသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံ ၀ န်ကြီးဌာနသို့လွှဲပြောင်းပေးသော Gebze-Darıca Metro Line ၏ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများကိုလေ့လာခဲ့သည်။ Kocaeli ၏ဖောင်ဒေးရှင်း [ပို ... ]
Kiptaş Silivri တတိယအဆင့်လူမှုအိမ်ရာစီမံကိန်းတွင်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူတစ်ထောင် ၅၁၁ ၏တိုက်ခန်းကို BBB သမ္မတ Ekrem amomamoğluကမဲချခြင်းဖြင့်ဆုံးဖြတ်သည်။ မနက်ဖြန်ကို Notary, BBB နှင့်Kiptaşတို့ကပုံဆွဲမည် [ပို ... ]
အထူးသဖြင့်နွေရာသီတွင်ထောင်နှင့်ချီသောလူများမကြာခဏတက်ရောက်လေ့ရှိသော Kordonboyu တွင် Izmir Metropolitan Municipality သည်လူမှုရေးအကွာအဝေးကိုစက်ဝိုင်းဖြင့်စတင်ခဲ့သည်။ Izmir နေထိုင်သူများသည်လျှောက်လွှာအပေါ်ကျေနပ်မှုရှိသည်။ Coronavirus တိုင်းတာမှုသည်တူရကီရှိ Izmir Metropolitan Municipality ၏လျှော့ချရေးအစီအမံများဘက်မှမှားယွင်းသည် [ပို ... ]
Zihni Derin (၁၈၈၀ တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီးMuğla - ၁၉၆၅၊ သြဂုတ်လ ၂၅ ရက်သေဆုံးသည့်နေ့၊ Ankara)၊ တူရကီစိုက်ပျိုးရေးပညာရှင်၊ တူရကီ၌လက်ဖက်စိုက်ပျိုးမှု၏စတင်ခြင်းနှင့်ပြန့်ပွားဖို့ ဦး ဆောင်; ၎င်းကို "လက်ဖက်ရည်ဖခင်" ဟုလူသိများသည်။ 1880 ခုနှစ်တွင် [ပို ... ]
အင်ဂျင်အာရစ် (၁၉၄၈ အောက်တိုဘာ ၁၄ ရက် - ၂၀၀၇ နိုဝင်ဘာ ၃၀) သည်ဘာဂျီဇီချီတက္ကသိုလ်ရူပဗေဒဌာန၏ပါမောက္ခဟောင်းဖြစ်ပြီးတူရကီအမှုန်ရူပဗေဒပညာရှင်ဖြစ်သည်။ သိုရီယမ်သတ္တုတွင်းသည်စွမ်းအင်ပြproblemနာအတွက်သန့်ရှင်း။ စီးပွားရေးကျနိုင်သည်။ [ပို ... ]